​ဒေါက်​တာ​မောင်​မောင်​၏(တိုု ့​ပြည်​ထောင်​စုု​သ​မ္မ​တ​မြန်​မာ​နိုုင်​ငံ​တော်ဖွဲ ့​စည်း​အုုပ်​ချုပ်​ပုံု ​ဥ​ပ​ဒေ .- ၁၉၅၉ ​ခုု​နစ် )
Billy H. Mackenzie(13 March 16) ﻿
​ဒီ​စာ​အုုပ်​လေး​ကိုု..၁၉၅၉ ​ခုု​နစ်..​ဗိုုလ်​နေ​ဝင်း ..​အိမ်​စောင့်​အ​စိုုး​ရ​ဆိုု​ပြီး..​အာ​ဏာ​ကိုု​တ​ရား​ဝင်​လွှဲ​ပြောင်း​ရ​ယူ​ထား​ချိန်​မှာ..
ဗိုုလ်​နေ​ဝင်း​က..​ဒေါက်​တာ​မောင်​မောင်​ကိုု ​ရေး​ခိုုင်း​တဲ့ ​အ​ခြေ​ခံ ​ဥ​ပ​ဒေ ​စာ​အုုပ်​လေး​ပါ ။
​သ​ရုုပ်​ပြ​ပုံု​တွေ​နင့် ​တင်​ပြ ​ပုံု​နိပ်​ထား​ပါ​တယ် ။ ၁၉၆၂ ​ခုု​နစ်​မှာ ​ဗိုုလ်​နေ​ဝင်း​အာ​ဏာ​သိမ်း​ပြီး​တာ​နင့် ​ထိုု​စာ​အုုပ်​ကိုု..​ထောက်​လှန်း​ရေး​တွေ​က ​အ​သေ​အ​ကျေ ..
​ပြန်​ရှာ​သိမ်း​တယ် ။ ​ဝယ်​တန်​လျင် ​ဈေး​ကြိး​ပေး​ဝယ်​တယ် ။
​နိုုင်​ငံ​ရေး​သ​မား​ကြိး​တွေ ​ကွယ်​လွန်​လျင် ​င​ထောက်​တွေ​က ​လူ​ကြိး​လာ​မည် ​ပြော..​အိမ်​ကိုု ​လုံု​ခြုံ​ရေး​အ​ရ ​ရှာ​တယ်​ပြော..​
စာ​အုုပ်​တွေ ​မှတ်​စုု​တွေ​သိမ်း ​ဖျောက်​ဖျက်​ပါ​တော့​တယ် ။
​ဒါ ​ဗိုုလ်​နေ​ဝင်း​ရဲ ့..​ဒီ​မိုု​က​ရေ​စီ ​ဆိုု​တဲ့​ဝေါ​ဟာ​ရ..​ပြည်​သူ​တွေ ​မ​ကြား​မိ​အောင် ၊ ​မ​သိ​အောင်..​အား​ထုုတ်​ကြိုး​ပမ်း​ချက်​ပါ​ဘဲ ။
​အဲ​ဒီ​အ​ကျိုး​ဆက်..​ထိုု​စာ​အုုပ်​လေး​က..​ပြည်​သူ​တွေ​ကြား​က ​ပျောက်​ကွယ်​သွား​ရ​ပါ​တယ် ။
​စာ​အုုပ်​လေး​မှာ​က..​သူ ့​ညာ​လက်​ရုံုး..​ဒေါက်​တာ​မောင်​မောင်​ကိုုယ်​တိုုင်..​အာ​ဏာ​ရှင်​ကိုု..​ရှုံ ့​ချ​ထား​ပြီး..​ဒီ​မိုု​က​ရေ​စီ​ကိုု ​အ​လေး​ပေး​ဖေါ်​ပြ​ထား​တဲ့​စာ​အုုပ် ။
၁၉၈၇ ​မှာ..​အ​သိ​တ​ဦး​နင့် ​ဆက်​နွှယ်​ပြီး.. ​မွတ်​စ​လင်​လူ​ငယ်​ရှေ ့​နေ​လေး​တ​ဦး​နဲ့​ကြုံု​ကြိုက်​ရ​ပါ​တယ် ။
​ကျ​နော်​က ​နိုု်င်​ငံ​ရေး​ကိ​စ္စ​တွေ ​မေး​မြန်း..​ဆွေး​နွေး​ဖြစ်​ရာ​က​နေ ​သူ​က ​ထိုု​စာ​အုုပ်​လေး​အ​ကြောင်း​စ​ကား​စ​လာ​ပါ​တယ် ။ ​ကျ​နော်​က ​ရှာ​ပေး​ဖိုု ့​အ​ကူ​အ​ညီ​တောင်း​တော့..၂ ​ပတ်​လောက်​နေ​တော့..​ပန်း​ဆိုုး​တန်း​က ​ဆိုုင်​တ​ဆိုုင်​ကိုု​သွား ​မေး​ခိုုင်း​တယ် ။
​ထိုု​ဆိုုင်​က ​ကြေး​နန်း​ရုံုး​ကြိး​ဘေး​က​ဆိုုင် ။ ​ကျ​နော်​မေး​တော့ ​ရှိ​တယ်​ဆိုု​တာ ​ရိပ်​မိ​ပါ​တယ် ။ ​မ​ပေး​ရဲ​ရှာ​ဘူး ။ ​ဒီ​လိုု​နဲ့​နောက်​ရက်​တွေ​ထပ်​သွား..​ခင်​အောင် ​လုုပ်​ရ​တာ​ပေါ့ ။ ​ကျ​နော့်​လက်​ထဲ ​မိ​သွား​လျင်..​သူ ့​ဆိုုင်​ကိုု​ဖေါ်​မှာ ​ကြောက်​နေ​တဲ့ ​ပုံု​ပါ ။
​တ​ရက်..​အ​ခြား​ဆိုုင်​ဖက် ​စာ​အုုပ်​ရှာ​ပြီး..​ထ​သွား​စ​မှာ...​လူ​တ​ယောက်​က​အ​နား​ကပ်​လာ​ပြီး.....​အ​ကိုု..​စာ​အုုပ်​ကောင်း​လေး​တွေ..​ယူ​မ​လား..။ ​ယူ​မယ်​လေ​ဆိုု​တော့..​လမ်း​ကြား​ဖက်​ခေါ်​သွား​ပြီး..​ဈေး​တော့ ​မ​ဆစ်​ပါ​နဲ့​အ​ကိုု​ကြိုက်​စေ​ရ​ပါ​မယ် ။
​စာ​အုုပ် ၄ ​အုုပ် ။ ​ထိုု​စာ​အုုပ်​လေး​လဲ​ပါ​တယ် ။ ​လူ​ကိုု ​မျက်​လုံုး..​အ​ရည်​လည်​သွား​မိ​တယ် ။ ​ဘယ်​လောက်​လဲ..​ဆိုု​တော့ ​အ​ကိုု​ဘဲ​အ​ရင်​ပြော​ပါ​ဆိုု​တော့..​ခက်​နေ​တယ် ။..​နောက်​တော့ ..၂၅၀ ​ပေး​ကြည့်​တယ် ။ ​သူ​က ၅၀၀ ​တောင်း. ။ ​နောက်​ဆုံုး..၄၀၀ ​နဲ ့​တည့်​လိုုက်​တယ် ။
​ထိုု​အ​ချိန်​က ​ရွှေ​ဈေး​က..၅၀၀၀ ​ကျပ်​ဈေး ။ ​လ​က္ဘ​ရည်​တ​ခွက် ၂ - ​ကျပ်​ခေတ် ။ ​ကြက်​သား​က ​တ​ပိ​ဿာ..၂၀​ခန် ့​ရှိ​ချိန် ။ ​သူ​တော့​မ​သိ ။ ​သူ​က​သာ..၁၀၀၀ ​ဆိုု​လဲ ​ပေး​ရ​တော့​မှာ ။ ​ကျ​နော်​က ​လိုု​ချင်​နေ​တာ..​စက်​စက်​ကိုု​ယိုု​လိုု့။
​ဖတ်​ကြည့်​တယ်..​တ​ည​လုံုး​ကိုု ​အိပ်​မ​ရ​တော့​ဘူး ။ ​နောက်​တ​ပတ်​လောက်​နေ​တော့. ့..​ရှမ်း ​ဦး​ခွန်​ထွန်း​ဥိး​ကိုု ​ပေး​ဖတ်​ပြီး..​မိ​တ္တူ​ဆွဲ​ခိုုင်း​တယ် ။ ​သူ​လဲ..​ကြား​တာ​ကြား​ဖူး​နေ​တာ ​မ​မြင်​ဖူး​ဘူး ။
​သူ ​က​တ​ဆင့် ​ရှေ ့​နေ​ကြိး ​ဒေါက်​တာ​မောင်​မောင်​ကျော်..​တိုု ့​လက်​ထဲ​ပြန် ့​ပေါ့ ။ ​ရုံုး​ခန်း​က ​စုု​ပေါင်း​ငှား​ထား​တဲ့ ​ရုံုး​ခန်း ။ ​ဦး​မောင်​မောင်​ကျော်​ဆီ​မှာ​လဲ ​မ​ရှိ​သေး​ဘူး ။
​အ​ရေး​အ​ခင်း​ဖြစ်​တော့...၈၈၈၈ -​အ​ဖွဲ ့​က ​မ​မွှေး​မွှေး ( ​ခေါ် ) ​အ​ဆိုု​တော်​ပန်း​အိ​စံ ​အ​ကူ​အ​ညီ​နဲ ့...​ယ​ခုု ​လုုပ်​ငန်း​ရှင်​သူ​ဌေး​ကြိး​တ​ဦး​ဆီ​မှာ..​မိ​တ္တူ​ဆွဲ ​ဖိုု ့​အ​ကူ​အ​ညီ​တောင်း​ပါ​တယ် ။
​မိ​တ္တူ​ဆွဲ​မှာ​က..​ထိုု​စာ​အုုပ်​ရဲ ့..​အ​စ​ပိုုင်း​က..( ​အာ​ဏာ​ရှင်​နင့် ​ဒီ​မိုု​က​ရေ​စီ ) ​နိုုင်း​ယှဉ်​ထား​ချက် ၁၇ ​ချက်​ပါ ။
​ကျ​နော်​က ​မ​တတ်​နိုုင်​တော့..၁၀၀၀ ​လောက် ​ဆွဲ​ပေး​ပါ​ပေါ့ ။ ​သူ​က ​ဖတ်​ကြည့်​ပြီး..​ကျ​နော် ​ဖ​ရီး​ဆွဲ​ပေး​ပါ​မယ်​ဆိုု​ပြီး​ယူ​ထား​လိုုက်​တယ် ။ ​ကျ​နော်​နေ​တဲ့ ​လိပ်​စာ​တော့ ​တောင်း​ထား​လိုုက်​တယ် ။
၂ ​ရက်​နေ​တော့..​ကျ​နော်​ဆီ ​ချာ​တိတ်​လေး..​တ​ယောက်​ရောက်​လာ​တယ် ။ ​သူ​နောက်​က..​လေး​ဘီး​ကား​လေး​နဲ့ ​အ​ထုုပ်​တွေ ​ပါ​လာ​တယ် ။ ​ချ​ပေး​သွား​ပြီး..​ပြန်​သွား​တယ် ။
​ကြည့်​လိုုက်​တော့ ​စောင်​ရေ..၂၀၀၀၀ ။ ၂ -​သောင်း..​လူ​ကိုု​မျက်​လုံုး​ပြူး​သွား​တယ် ။ ​စာ​အုုပ်​တွေ​ကိုု..​တ​ခြား​အ​ခန်း​တွေ​မှာ ​ခွဲ​ထား​လိုုက်​ပါ​တယ် ။
​မ​မွှေး​မွှေး​ကိုု..၃၀၀၀ ​ပေး​လိုုက်​တယ် ။ ​မ​မွှေး..​ကိုု​လဲ..​ထိုု​သူ​က ​သီး​သန့်၅၀၀၀ ​ပေး​သေး​တယ် ။ ​တ​ခြား​ဘယ်​သူ ့​ကိုု​ပေး​ဦး​မ​လဲ ​မ​သိ​ဘူး ။
​ကျ​နော် ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်း​စုု​ကြည့်​ဆီ​က​ကိုု..၃၅၀၀ ​လောက်​ပေး​ဖြစ်​တယ် ။ ​တ​ခြား​အ​ဖွဲ ့​အ​စည်း​တွေ​ကိုု​လဲ​ပေး​ပါ​တယ် ။ ​အ​ထုုူး​သ​ဖြင့် ​သ​ပိတ်​လမ်း​ကြောင်း​တွေ​မှာ..​ကျို​ကြား​ဝေ​ပေး​တယ် ။
​မ​ကြာ​ဖူး..​လမ်း​တွေ​ပေါ်​မှာ ​မိ​တ္တူ​တွေ ​ရောင်း​ချ​လာ​ပါ​တော့​တယ် ။
​နောက်​တော့ ​ကျ​နော့်​ဆီ​မှာ..​ကုုန်​သွား​ပါ​တယ် ။ ​ရေ​နံ​ချောင်း​က ​အ​လုုပ်​သ​မား​သ​ပိတ် ​အ​ဖွဲ ့​တွေ​လာ​တော့..​ပေး​ရန်​မ​ရှိ​တော့ ။ ​တ​ခါ ​မုံု​ရွာ​က​ကျောင်း​သား​အ​ဖွဲ ့​တွေ​လာ​တော့ ​ပေး​စ​ရာ​မ​ရှိ​တော့..​ဒေါ်​စုု ​ခြံ​မှာ..​ပြန်​အ​ကူ​တောင်း​တော့...​သ​ခင်​ဘွဲ ့​ခံ​ထား​တဲ့..​ခြံ ၄ ​ခါ​ခုုန်​ထား​တဲ့..​ဦး​တင်​မြ ​က ​ဆ​ရာ​ကြိး​လုုပ်​နေ​ပြီ ။ ​ကျ​နော်​နဲ ့​က ​တ​ဇောင်း​စေး​နဲ့​မျက်​ချေး ။ ​မ​ပေး​မ​ကောင်း​တော့..​ကျ​နော်​ကိုု..၃ ​အုုပ်​ပေး​တယ် ။
​ရေ​နံ​အ​လုုပ်​သ​မား​တွေ ​ရောက်​သွား​တော့..၃၀ ​လောက်​ပေး​တယ် ။ ​မုံု​ရွာ​ကျောင်း​သား​တွေ ​သွား​တွေ ့​တော့ ၅၀ ​လောက်​ပေး​တယ် ။ ​နိုုင်​ငံ​ရေး​စုုပ်​ပဲ့​မှု​ပါ ။
​နောက်​တော့​အာ​ဏာ​သိမ်း​တယ် ။ ​န.​ဝ.​တ ​တက်​လာ​တယ် ။ ၁၉၉၂ ​ဧ​ပြီ​လ..၂၃ ​ရက်​မှာ..​မင်း​တ​ရား​ကြိး ​တက်​လာ​တယ် ။ ​အ​မျိုး​သား​ညီ​လာ​ခံ ​ကြေ​ငြာ​တယ် ။ ၉၃ ​မှာ ​အ​မျိုး​သား​ညီ​လာ​ခံ​စ​တော့...​ကိုုယ်​စား​လှယ်​တွေ​လေ့​လာ​ဖိုု ့..၄၇ -​ဥ​ပ​ဒေ​ဖြစ်​တဲ့..​ဒီ​စာ​အုုပ်​လေး​ကိုု ​ပုံု​နိပ်​ပေး​ရ​တယ် ။ ​ရ၄ ​ဥ​ပ​ဒေ​ကိုု​လဲ​ထပ်​ပုံု​နိပ်​ပေး​ရ​တယ်​ပေါ့ ။
​လူ​ထုု​ကိုု​လဲ​ရောင်း​ချ​ပါ​တယ် ။ ​စာ​အုုပ်​ကိုု ​အ​ဖုံုး​အ​ရောင်​က​အ​စ..​တူ​အောင်​ရိုုက်​ထား​ပေ​မည့်..​အ​ထဲ​မှာ..​ကျ​နော်​အ​ရေး​အ​ခင်း​မှာ ​ဖြန် ့​ဝေ​ခဲ့​တဲ့..​အာ​ဏာ​ရှင်​နင့် ​ဒီ​မိုု​က​ရေ​စီ​နိုုင်း​ယှဉ်​ချက် ​ကိုု​ချန်​ထား​ခဲ့​တယ် ။
​အဲ​ဒီ​မှာ..​ကျ​နော်​ဖြန် ့​ထား​တဲ့ ​မိ​တ္တူ​က ​ပြန် ​ပေါ်​ထွက်​လာ​တော့..​စာ​အုုပ်​ကိုု..​ဒုု​တိ​ယ​အ​ကြိမ်​ပြန်​ရိုုက်​ပြီး..​ပြန်​ထဲ့​ပေး​ရ ( ​ရ​ရှာ ) ​ပါ​တော့​တယ် ။
​ခင်​ညွှန် ့​တိုု ့​က ​လိမ်​လိုု ​ရ​နိုုင်​သ​မျှ ​လိမ်​ကြည့်​တာ​ဘဲ ။ ​ဒါ​သူ​တိုု ့​ရဲ ့​မွေး​ရာ​ပါ ​ဗီ​ဇ ​သ​နေ္ဓ ​ဖြစ်​နေ​ပြီ ။
​အဲ​ဒီ​စာ​အုုပ်​မှာ..​သ​မ​တ​ဖြစ်​ရန်​ကန် ့​သတ်​ချက်​တွေ ​ပါ​ပါ​တယ်​ဗျာ ။ ​ဖတ်​ကြည့်​ကြ​ပါ ။
Billy H. Mackenzie -------------------------------------------------------------------------